विद्यार्थी – Lokpati.com
नेकपा केपी शर्मा ओली राशिफल नेपाल प्रहरी प्रचण्ड चितवन अपराध पक्राउ अमेरिका नेपाली काँग्रेस सरकार मृत्यु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
प्रधानाध्यापककाे कुटाइबाट विद्यार्थीकाे दाँत झरेपछि…
काठमाडाैं । प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट एक छात्र घाइते भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नं १४ नारायणस्थानस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रअ कृष्ण गौतमको कुटाइबाट कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र १६ वर्षीय कुशल पौडेल घाइते भएका हुन्। कुटाइका कारण…
‘कानून’ मा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो
काठमाडौं, २२ साउन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)पछि कक्षा ११ मा कानून अध्ययनमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था पनि बढेका छन्। तर, कतिपय शैक्षिक संस्थाले आर्थिक भार कम गराउन एलएलबी उत्तीर्ण शिक्षक राखेका छन्।…
जनकपुरधाम, १२ असार । धनुषाको विदेह नगरपालिका ६ गिद्धास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकसँगै विद्यार्थी पनि आन्दोलित बनेका छन्। बुधबार आन्दोलनकारीले हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध पारेर त्यहाँका मेयर बेचन दासविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। तलब…
अब विद्यार्थीले डिग्रीको सर्टिफिकेट पाउन १० वटा रुख रोप्नै पर्ने
काठमाडौं, २२ जेठ । विद्यार्थीले डिग्रीको सर्टिफिकेट पाउन १० वटा रुख रोप्नै पर्ने भएको छ। दुनियामा वनजंगलको क्षेत्रफल घटिरहेको छ। वनस्पतिहरु नासिँदैछन्। वन जोगाउन तथा बढाउनका लागि विश्वभर नै विभिन्न उपाय अपनाउने गरिएको छ। यसै क्रममा एउटा…
यसरी लेख्नुस् थेसिस (टिप्स्)
थेसिस लेख्ने तरिका थाहा नहुँदा विद्यार्थीहरु अन्यौलमा हुन्छन्। नियमित कक्षा लिएका हुदैनन्। कसरी गर्ने भन्ने विद्यार्थीलाई जानकारी नहुँदा वर्षाैंदेखि अधुरै हुन्छ। विद्यार्थीको समस्या बुझेर शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले फेसबुकमार्फत थेसिस…
विद्यार्थीबाट कुटिए प्रिन्सिपल, आँखामा गम्भिर चाेट
काठमाण्डौं, ९ जेठ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६ का एक विद्यालयका प्रिन्सिपल विद्यार्थीको कुटाइबाट घाइते भएका छन्। अनाथ र गरिब परिवारका बालबालिकालाई होस्टलमा राखेर पढाउदै आएका विद्यालयका प्रिन्सिपल निर्मल तामाङ घाइते भएका हुन्। तामाङको देब्रे…
के–के हुन् असल शिक्षकका प्रमूख विशेषता ?
शिक्षक बन्न जति सजिलो छ, असल शिक्षक बन्न त्यति नै कठिन छ। एउटा शिक्षक शैक्षिक योग्यताले मात्रै पनि बन्न सक्छ। तर, असल शिक्षक बन्न धेरै गुण आवश्यक हुन्छ। हामीले यहाँ असल शिक्षकका केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं। १) शिक्षकहरू नै समाजका बौद्धिक…
कसरी पढ्ने ? यी हुन् पढ्ने उत्तम तरीका (१० टिप्स्)
पढेपछि पास मात्रै होइन, पहिलो नै हुने जो कोहीलाई पनि मन हुन्छ। तर सबैको इच्छा पूरा हुन सक्दैन। जति पढ्दा पनि परीक्षाका बेला पढेको कुरा लेख्न नसक्दा परिक्षार्थीले सोचेको जस्तो नम्बर नआउने, कोही फेल नै पनि हुन सक्छन्। यसले गर्दा विद्यार्थीहरु…
सयौं थुंगा गाउँदै भारतीय बालबालिका, भारतको राष्ट्रिय गान आउँदैन
काठमाडौं, ३ जेठ। भारतको किशनगञ्ज जिल्लाको डल्लेगाउका बालबालिका नेपाल पढ्न आउँछन्। आफ्नो गाउँमा विद्यालय नभएपछि उनीहरु घन्टौ हिँडेर पढ्नकै लागि नेपाल आउने गरेका छन्। भारतीय ‘मेन मिडिया’ले तयार पारेको भिडियो हेर्दा सबैलाई अचम्ममा पार्ने गरी…